NgoMsombuluko, Agasti 24, 2009 NgeSonto, Agasti 2, 2015 U-Adam Encane
Kunalo mfana oyedwa ku-Twitter ongalandelani futhi angilandele kulokho okubonakala kufana nesonto ngalinye. Ngicabanga ukuthi ukholelwa ukuthi ngizomlandela ngokuzumayo (ngoba anginazo izikhathi ezingama-27 zokugcina azamile.). Kumele acabange ukuthi ngisebenzise i-akhawunti yami nge-automated noma ukuthi ngiyimvu ezochofoza landela kunoma ngubani ongilandelayo.
Angimlandelanga emuva okokuqala ngoba ngibheke umugqa wakhe wesikhathi futhi angibonanga lutho olunenani eliqondile kimi. Akukhona ukuthi ubekhuluma noma yini embi noma ukuthi ucindezela i-porn. Anginantshisekelo kumkhiqizo awuthengisayo, akekho emkhakheni wami, akasho lutho engikuthola kukuthakazelisa ukude, futhi akayona indawo - zonke izindlela engizisebenzisayo ukunquma ukuthi ngizolandela yini othile noma cha. (Awudingi ukuhlangabezana nayo yonke imibandela; eyodwa kuphela.)
Anginazo izinombolo zokulandela ezinkulu ezifiselekayo, kepha manje? Angifuni izinombolo ezinkulu ngoba zipholile. Noma kunjalo, kuze kube manje ngisanda kumziba lo mfana. Kuwo wonke amaqhinga wezinto kumane nje kuyisicefe esincane njengaleso umiyane owodwa ovele endaweni yokugcoba. Kepha leyo yinto - ngiyaqala ukubona lo mfana njengomuntu omiyane nje kuphela.
Eqinisweni, unguye kulimaza umkhiqizo wakhe nomuntu obonakala sengathi ukulangazelele kakhulu ukubamba ugibe. Ngenkathi ekuqaleni ngimbona njengosomabhizinisi osemthethweni nomkhiqizo ohloniphekile ongangithandi nje, manje ngimbheka njengesilwane esidlayo engingasoze ngasincoma emphefumulweni.
Manje njengoba sengibhalile, ake ngikubuze umbuzo, mfundi othandekayo. Uma uzibophezele ekusebenziseni i-Twitter njengecebo lokwakha umkhiqizo, yiziphi izindlela okholelwa ukuthi zingalimaza umkhiqizo wakho?
Ukuvuselelwa: Ngaphambi kokuthi ngibe nethuba lokushicilela lokhu okuthunyelwe, umsebenzisi we-Twitter okukhulunywa ngaye kumele abone amaTweets ami ahlambalazayo ngaye. Wavimba me. Ngimane ngihlekisiwe.
Tags: ukuziphatha kabi kwe-twitteriphutha le-twittertwitter landelaamaphutha we-twitter
Izifundo ezinhlanu nemfihlo eyodwa enkulu yokubhuloga ngokushesha